एमसीसीमा सत्ता गठबन्धन: पाँच दलमा को, कता तिर छन् ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsएमसीसीमा सत्ता गठबन्धन: पाँच दलमा को, कता तिर छन् ?
एमसीसीमा सत्ता गठबन्धन: पाँच दलमा को, कता तिर छन् ?
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय लिएर केहि समय अघि पारित गर्ने पक्षमा देखिएका र पारित नगर्ने पक्षमा देखिएका नेता तथा उनका दलहरुको विचारमा अहिले १८० डिग्रीको परिवर्तन देखिएको छ। ४ वर्ष अघि नेपाल एमसीसीको मनोनयनमा परेपछि पारित गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कम प्रचार मै यसको स्वागत भैसकेको थियो। पछिल्लो समय भने एमसीसी सदनबाट पारित पश्चात मात्रै कार्यन्वयनमा जाने एमसीसीको प्रस्तावका कारण यसले बिस्तारै चासो र चर्चा बटुल्यो।
एमसीसीको फाइदा र घाटाका विषयमा बौद्धिक तथा जनस्तरमा चर्चा हुन थालेपछि, तत् तत् समयका सरकारले सदनबाट पारित गर्ने समयमा विरोध र स्वागतमा मिस्रित स्वरहरु सुनिन थाले। एमालेको दुई तिहाइ सरकार हुँदा एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन जनआवाज वाहेक ठुला पार्टिबाट कुनै रोकतोक थिएन तर एमाले भित्रैबाट भने यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ भन्ने खालका टिप्पणि आए। सो समयमा माओवादी केन्द्र पक्ष, कांग्रेसहरुको सहमति देखिएको थियो भने अहिले नेकपा एमाले विभाजन भएको छ। माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूह छुट्टिएको अवस्था छ।
सर्वोच्चको फैसलाले एमाले टुक्रियो, र परमादेश मार्फत शेर बहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो। पाँच दलको सत्तारूढ गठबन्धनमा सरकार गठनका भयो तर अहिले एमसीसी सम्बन्धि पाँच दलको पाँचवटै धारणा देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस सहमतिबाटै एमसीसी पास हुनेमा ढुक्क छ भने माओवादी केन्द्रले संसदबाटा एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताएको छ ।
यसैगरी, सत्तारूढमध्येकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्न नसकिने भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले धारणा नै दिएको छैन ।
यसैगरी, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी सहमतिबाटै संसदबाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्न आफ्ना सांसदलाई आग्रहसमेत गरे ।
यसैगरि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको यस्तो विचार रहेको छ
Previous articleसंसदमा उठान विषय र परिस्थितीका आधारमा ध्यान दिनुपर्ने ४ महत्वपुर्ण प्रसङ्ग (भिडियो)
Next articleमाधव नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच चर्काचर्की, मन्त्रालयको भागबण्डा अझै मिलेन